Iselulosi Ifayibha yoMvelisi-China Iselulose Ifayibha abavelisi, abaxhasi
Ukutshiza i-Cellulose Fibre yokuNgqinisisa kunye nokuNcitshiswa kwesandi
Ngobushushu bayo obugqithisileyo, ukusebenza kwe-acoustic kunye nenqaku elihle lokukhusela indalo, i-Ecocell® tshiza iselulosi fiber ukuqhuba ukuyilwa kwemveliso yefayibha ye-organic. Le mveliso yenziwe ngemithi yendalo enokuphinda isetyenziswe ngokutsha ngokusebenzisa inkqubo ekhethekileyo yokwenza ukhuselo lokusingqongileyo oluhlazaizinto zokwakha kwaye awunayo i-asbestos, ifayibha yeglasi kunye nezinye izinto ezenziwe ngombane. Inepropathi yokuthintela umlilo, ubungqina bokungunda kunye nokunganyangeki kwizinambuzane emva konyango olukhethekileyo.
I-Ecocell® tshiza ifayibha yeselulosi lwenziwa ngabasebenzi bezokwakha bezobuchwephesha abanezixhobo ezizodwa zokutshiza kulwakhiwo, alunakho ukudibanisa kuphela nezinto zokuncamathela ezikhethekileyo, ukutshiza kuso nasiphi na isakhiwo kwiingcambu zengca, nefuthe lokufaka isandi sokufunxa isandi, kodwa kananjalo ngokwahlukeneyo ugalelwe kwisakhiwo sodonga, esenza uxinaniso inkqubo yokugquma engangeni.
I-Ecocell® GSMA iselulosi ifayibha yenye yezinto ezibalulekileyo ze I-asphalt yamatye. I-asphalt pavement (Indlela yeSMA) kunye ne-Ecocell® I-GSMA inentsebenzo elungileyo yokumelana neskid, ukunciphisa amanzi angaphezulu kwendlela, ukuphucula ukhuseleko lokuqhuba kwezithuthi kunye nokunciphisa ingxolo. Ukongeza ifayibha yeselulose ye-GSMA kwimixube ye-SMA, ifayibha yeselulosi inokuba kumacala-amathathu amile kumxube, njengetyhubhu yentsimbi eqinisiweyo, ikhonkrithi kunye nezinto zegotextiles eziqinisiweyo, zinokudlalaukuqinisa ukusebenza kulwakhiwo lwendlela, ezinokuthi zenze imveliso iqiniseke ngakumbi.
Ukusetyenziswa kwendlela yeSMA, sineentlobo ezimbini iselulosi ifayibha: Ifayibha ye-GSMA yeselulosi ene-10% yebhitumen kunye ne-GSMA-1 Cellulose fiber ngaphandle kwebhitumen.
1.Ifayibha yeselulosi, ikwabizwa ngokuba lignin ifayibha okanye ifayibha yeenkuni, luhlobo lwe-organic fiber material eveliswe yi yendalo iinkuni zinyangwa ngamachiza. Ngenxa yepropathi yokufunxa amanzi, inokudlala indimaukugcina amanzi Ngexesha lokomiswa okanye lokuphiliswa kwezinto zomzali kwaye ngaloo ndlela kuphuculwe imeko yolondolozo lwezixhobo zomzali kunye nokwandisa izikhombisi ezibonakalayo zezinto zomzali.
2. Ngenxa yobume besilika kunye nobungqongqo bepropathi, inokudlala indima yekhonkco kwi-masterbatch ukuze kwandiswe ukuguquguquka kwe-masterbatch, ukuqina, anti-ukuqhekeka, kunye nokusebenza okuncipha okuphantsi kwifayile ye- udaka oluxutywe owomileyo.